कोरोना भ्याक्सिनले शरीर ‘चुम्बक’ बनाएको दाबी, के यस्तो सम्भव छ ? - Upabhokta Nepal
Reporter	काठमाडौं	जेठ २८, २०७८
अरविन्द सोनारले कोभिशिल्ड भ्याक्सिनको पहिलो डोज मार्च ९ मा लिएका थिए र दोस्रो डोज जून २ मा । १० वर्ष अघि उनको बायपास शल्यक्रिया भएको थियो । दुई वर्षदेखि उनको मधुमेहको उपचार चलिरहेको छ ।
जब अरविन्द सोनाको शरीरमा फलाम र स्टिलका चिज टाँस्सिन थाले तब उनले आफ्ना डाक्टरलाई यसबारे बताए । सोनारको दाबी कति वास्तविक हुनसक्छ, यो बुझ्नका लागि बीबीसी मराठीले अन्धश्रद्धा निर्मूलन समितिका डाक्टर हामिद दाभोलकरसँग कुराकानी गरे ।
दाभोलकरका अनुसार खोप अभियान कोरोनाविरुद्ध महत्वपूर्ण हतियार हो । यस्तोमा यसको विषयमा कुनै पनि सनसनीखेज दाबीबाट बच्नुपर्छ । जेजे मेडिकल कलेजका डीन डा. तात्यारावे लहानेले पनि सोनारको दाबी खारेज गरेका छन् ।
२०७८ जेठ २८ गते शुक्रवार १२:४२ बजे प्रकाशित